Muvhuro 26 Gumiguru 2020
Gumiguru 25, 2020
Zimbabwe nemusi weSvondo yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZanu PF mapato ezvematongerwo enyika vaine maonero akasiyana panyaya iyi.
Vamwe vemabhizinisi nemakambani pamwe nezvimwe zvikoro zvepamusoro vanoti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa nyika zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka. Asi vamwe vanopikisa vanoti huwori uye kusajeka kwegwara rezvehupfumi munyika ndiko kwakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
VaDonald Trump vavhota kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida, pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa 03 Mbudzi. VaTrump, avo vakatora Florida sekumusha kwavo, vavhotera pane imwe yenzvimbo dziri kuvhoterwa zuva resarudzo risati rasvika, yePalm Beach County Public Library, kwakare kuWest Palm Beach.
Vechidiki veZanu PF vashoropodza nhepfenyuro yeVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezvinenge zvichiitika muZimbabwe.
Vamwe vabereki nhasi vanga vachiita chipatapata kuita gadziriro yekuti vana vavo vadzokere kuzvikoro mangwana vakatarisira kutanga kudzidza neMuvhuro sezvakatarwa nehurumende. Vana vakatarisirwa kutanga kudzidza vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rinouya.
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo VaJoe Biden nhasi vaita gakava raburitsa pachena kusiyana kwematanho avachatora mukutungamira nyika
Vagari vemudhorobha reMasvingo vochema-chema kuti mitengo yezvinhu, kunyanya chikafu, yakakwira zvisingaiti muzvitoro apo hurumende iri kuti mamiriro ehupfumi hwenyika hwaka gadzikana.
Gender Commission inoti yakamira kuferefeta nyaya yaipomerwa VaWalter Magaya veProphetic Healing and Deliverance Ministries, yekuita tanga wandida kumadzimai emusvondo mavo mushure mekunga VaMagaya vapikisa ongororo iyi kudare reHigh Court. Godwin
Bato reZAPU rinoti kuitwa kwegungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala pamwe nekucherechedzwa kwezuva reAnti-Sanctions Day kurasa mari uye mucherechedzo wekutadza kwehurumende kuziva zvinhu zvakakoshera nyika.
Gakava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vebato remaRepublicans nevavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika VaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangawanani anhasi.
Gumiguru 22, 2020
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mngangagwa neChina vakatura mashoko emamiriro akaita zvinhu pamwe nekuvhura zviri pamutemo chikamu chechitatu cheparamende yechipfumbamwe vachiti hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa nhuna dzevashandi vayo pamwe nehupfumi hwenyika.
Vamwe vanoti hakata dziri kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika nekuda kwezvirango zvinonzi nevamwe muhurumende nemuZanu PF zvakatemerwa nyika nevekumawirira.